ရန်ကုန်မြို.ကြီးက တကယ့်ကို လုံခြုံမှု့ ကင်းမဲ့နေပြီဆိုတာကို ဖော်ပြနိုင်တဲ့ video ဖိုင်ပါပဲ | Buzzy
ရန်ကုန်မြို.ကြီးက တကယ့်ကို လုံခြုံမှု့ ကင်းမဲ့နေပြီဆိုတာကို ဖော်ပြနိုင်တဲ့ video ဖိုင်ပါပဲ
video ကတော့ တော် တော်ကြမ်းတယ်
အခန်းတံခါးကို ဖျက်ပြီး ဖောက်ဝင်တဲ့ ဖြစ်ရပ်ကတော့ တာမွေမြို.ရှိ (၇)လွှာတိုက်ခန်း တစ်ခုတွင် ဖြစ်ပွားသွားခဲ့ပါတယ်။ တကယ်တော့ CCTV ရှိပေမဲ့လည်း ဘယ်သူဘယ်ဝါဆိုတာ အတိအကျဖော်ထုတ်သိရှိဖို့ မလွယ်ကူနိုင်ပါဘူး။အဲ့ဒါကြောင့်် ပုံကို ဗဟုသုတအနေနဲ့ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။သေချာကြည့်ပြီး ဆင်ခြင်သင့်ပါတယ်။
အခနျးတံခါးကို ဖကျြပွီး ဖောကျဝငျတဲ့ ဖွဈရပျကတော့ တာမှမွေို.ရှိ (၇)လှာတိုကျခနျး တဈခုတှငျ ဖွဈပှားသှားခဲ့ပါတယျ။ တကယျတော့ CCTV ရှိပမေဲ့လညျး ဘယျသူဘယျဝါဆိုတာ အတိအကဖြျောထုတျသိရှိဖို့ မလှယျကူနိုငျပါဘူး။အဲ့ဒါကွောငျ့ ပုံကို ဗဟုသုတအနနေဲ့ဖျောပွပေးလိုကျပါတယျ။သခြောကွညျ့ပွီး ဆငျခွငျသငျ့ပါတယျ။
တကယ့်ကို ကြောက်စရာပါပဲ လူလစ်တာနဲ့
video ဖိုင်အပြည့်အစုံ ပေးထားပါတယ်
ကဲ ဒါကတော့ video ဖိုင် အပြည့် အစုံပါ။ရန်ကုန်တာမွေမြို.နယ်အတွင်းရှိတိုက်ခန်းတစ်ခန်းကို လူ၂ ယောက်နဲ့ ဘယ်လိုဖောက်ထွင်းသွားသလဲ ဆိုတာ CCTV မှတ်တမ်းတွေကသက်သေပြနေပါတယ်။
ကဲ ဒါကတော့ video ဖိုငျ အပွညျ့ အစုံပါ။ရနျကုနျတာမှမွေို.နယျအတှငျးရှိ တိုကျခနျးတဈခနျးကို လူ၂ ယောကျနဲ့ ဘယျလိုဖောကျထှငျးသှားသလဲ ဆိုတာ CCTV မှတျတမျးတှကေ သကျသပွေနပေါတယျ။
အဲ့ဒီ CCTV မှတ်တမ်းတွေအရ ရန်ကုန်မြို. ဆိုတာဟာ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ၊ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ လုံခြုံမှု့ မပေးနိုင်တော့ဘူးလားလို့ မေးခွန်းတွေမေးရုံမှအပ တစ်ခြားဘာမှပြောလို့ မရနိုင်ပါဘူး။အဲ့ဒီအမှုရဲ. တရားခံဖမ်းမိမှု အခြေအနေတွေနဲ့ ပတ်သတ်ပြီး သေသေချာချာ မသိရသေးပါဘူး ။ မိမိတို့ အနေနဲ့ အမြဲသတိရှိကြဖို့ ယခု CCTV က သက်သေပြနေပါတယ်။
အဲ့ဒီ CCTV မှတျတမျးတှအေရ ရနျကုနျမွို. ဆိုတာဟာ စိတျပိုငျးဆိုငျရာ၊ရုပျပိုငျးဆိုငျရာ လုံခွုံမှု့ မပေးနိုငျတော့ဘူးလားလို့ မေးခှနျးတှမေေးရုံမှအပ တဈခွားဘာမှပွောလို့ မရနိုငျပါဘူး။အဲ့ဒီအမှုရဲ. တရားခံဖမျးမိမှု အခွအေနတှေနေဲ့ ပတျသတျပွီး သသေခြောခြာ မသိရသေးပါဘူး ။ မိမိတို့ အနနေဲ့ အမွဲသတိရှိကွဖို့ ယခု CCTV က သကျသပွေနပေါတယျ။